UNGAYIDLULISA KANJANI ILAYISENSE LEWINDOWS 10 TO COMPUTER NEW / ANOTHER HARD DRIVE 2020 - I-WINDOWS 10
Ungayidlulisa kanjani ilayisense lewindows 10 to computer new / another hard drive 2020
Ufuna ukushintshela kwi-PC entsha, Futhi ucabanga ngamawindows windows licence afakwe kwikhompyutha endala noma athenge entsha Windows 10 ilayisensi yekhompyutha entsha? Lapha lokhu okuthunyelwe sixoxa ngokuthi kanjani dlulisa ilayisense le-windows 10 kwikhompyutha entsha . Noma uma uhlele ukuthuthukisa i-HDD iye kwi-SSD lokhu okuthunyelwe kukusiza kakhulu njengoba lapha sixoxa ngokuthi ungayikhipha kanjani ilayisense lamanje le-windows 10 bese wenza okufanayo kukhompyutha ehlukile noma i-HDD / SSD.
Okuqukethwe umbukiso 1 Ungayidlulisa kanjani i Windows 10 ukhiye womkhiqizo kwi-PC entsha ezimbili Khipha ukhiye womkhiqizo we-Windows 10 kusuka kukhompyutha yamanje 3 Yenza kusebenze iWindows 10 kukhompyutha entsha 4 Ukufaka Windows 10 ukhiye womkhiqizo usebenzisa i-Command Prompt 5 Ngesandla kusebenze amawindi 10 ngocingo noma sebenzisa Imininingwane Yokuxhumana
Qaphela Ngaphambi kokudlulisela ilayisensi le-windows 10 kukhompyutha entsha
windows 10 dns ayisebenzi
Ngokudlulisa, kusho ukuthi sizokhipha ifomu lelayisense ikhompyutha endala ukuze siyifake kwenye ikhompyutha entsha. Njengokufanayo Windows 10 ilayisense ayikwazi ukusetshenziswa ngasikhathi sinye kumakhompyutha amabili.
Kunezinhlobo ezintathu zokhiye welayisensi yeWindows, i-OEM, iRetail, neVolumu. Uma ilayisense lakho lidayisa noma livolumu, noma uma uthuthukise kwikhophi yokuthengisa ye-Windows 7, i-Windows 8 noma i-8.1, ilayisense le-Windows 10 liphethe amalungelo okuthengisa okususelwe kuwo - ingadluliselwa . Kepha ngaphansi kwemithetho yeMicrosoft, unelungelo lokudluliswa ngasikhathi sinye kuphela.
Kodwa-ke, ikhophi le-OEM lenzelwe ukuthi likhiyelwe kwi-hardware ebifakwe kuyo ekuqaleni. IMicrosoft ayifuni ukuthi ukwazi ukuhambisa lawo makhophi e-OEM e-Windows kwenye ikhompyutha. Uma kufanele uhambise ilayisense le-OEM kwenye ikhompyutha, ungashayela abasebenzi bokusiza beMicrrrooosoft ukuze bakusebenzele ilayisense.
Uma unekhophi eligcwele lokuthengisa le Windows 10, ungalithumela kaningi ngendlela ofuna ngayo.
Lapho udlulisa ukhiye womkhiqizo kudivayisi entsha, khumbula ukuthi ungenza kuphela kusebenze uhlelo olufanayo lwe-Windows 10. Isibonelo, uma ukhipha ukhiye womkhiqizo we-Windows 10, ungasebenzisa kuphela enye ikhompyutha esebenzisa i-Home edition.
Ungayidlulisa kanjani i Windows 10 ukhiye womkhiqizo kwi-PC entsha
Okokuqala, qiniseka ukuthi unokhiye welayisense obhalwe phansi ephepheni nawe. Uma ungakwenzi, landa bese u-Run produkey ukuthola eyakho Windows 10 ukhiye womkhiqizo.
phoqelela windows 10 buyekeza 1709
Khipha ukhiye womkhiqizo we-Windows 10 kusuka kukhompyutha yamanje
Ukukhipha ukhiye womkhiqizo kusuka kudivayisi,
Vula Qala .
Cinga Yala ngokushesha , chofoza kwesokudla umphumela ophezulu, bese ukhetha Qalisa njengomlawuli .
Thayipha umyalo olandelayo ukukhipha ukhiye womkhiqizo bese ucindezela Faka : slmgr /upk
Lo myalo uzokhipha ukhiye womkhiqizo, ozokhulula ilayisense noma ukhiye womkhiqizo ukuze usetshenziswe kwenye ikhompyutha. Qaphela: Uma ungawuboni umlayezo 'Ukhiye womkhiqizo ongakhishiwe ngempumelelo', zama ukusebenzisa umyalo kaningi uze ubone umyalezo.
Yenza kusebenze iWindows 10 kukhompyutha entsha
Manje ukwenza kusebenze Windows 10 kwi-PC yakho entsha nelayisense endala ekhishiwe. Vele ulandele imihlahlandlela engezansi yokuvuka Windows 10 manje:
1. Iya ku Amasethingi > Uhlelo .
2. Chofoza Mayelana , chofoza Yenza kusebenze bese ufaka okungafakwanga Windows 10 ilayisensi yokuyisebenzisa ku-PC yakho entsha.
Lindela ukuthi inqubo iqede bese uzokwazi ukusebenzisa okudlulisiwe Windows 10 kwi-PC yakho entsha futhi.
Ukufaka Windows 10 ukhiye womkhiqizo usebenzisa i-Command Prompt
Futhi ukusebenzisa i-Prompt yomyalo ungasebenzisa ilayisense kudivayisi entsha nge ukufakwa okusha kweWindows 10 ngaphandle ilayisense, yokwenza lokhu:
Thayipha umyalo olandelayo ukufaka ukhiye womkhiqizo kudivayisi entsha bese ucindezela Faka : slmgr /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
Qaphela: Miselela xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx ngokhiye wakho womkhiqizo
Manje sebenzisa umyalo ku slmgr / dlv ukuqinisekisa Ukuqalisa. Qiniseka ukuthi uxhumeke ku-inthanethi ngaphambi kokwenza lezi zenzo.
ithuluzi lokutakula iphasiwedi elilula kakhulu
Ngesandla kusebenze amawindi 10 ngocingo noma sebenzisa Imininingwane Yokuxhumana
Futhi, ungavuselela ngesandla ikhophi yakho yelayisense ye-OEM ngocingo noma usebenzise i-Contact Support. Ukwenza lokhu Cindezela Ukhiye weWindows + R bese uthayipha: slui.exe 4 bese ushaya u-Enter kukhibhodi yakho. Manje usuzothola iwizadi yokwenza kusebenze. Khetha izwe lakho bese uqhafaza Olandelayo .
Shayela inombolo oyibonayo esikrinini sokwenza kusebenze noma uqalise i-Contact Support ukuze uchaze isimo sakho kwiMicrosoft Answer Tech ngocingo Uzocela i-ID yokufaka oyibona esikrinini futhi akusize uqhubeke nokwenza kusebenze.
Umenzeli uzoqinisekisa ukhiye wakho womkhiqizo, bese enikeza i-ID yokuqinisekisa yokuqalisa kabusha Windows 10.
windows 10 unamathele kusikrini sokwamukela ngaphambi kokungena ngemvume
Thayipha i-ID yokuqinisekisa enikezwe yi-ejenti yokusekela ye-Microsoft ukuze uphinde wenze kusebenze ikhophi yakho.
Chofoza le Yenza kusebenze iWindows njengoba kuqondiswe esikrinini.
Ngemuva kokuqeda izinyathelo, Windows 10 kufanele isebenze kukhompyutha entsha.
Ngabe lokhu okuthunyelwe kusizile 'ekudluliseleni ilayisense lewindows 10 kwikhompyutha entsha'? usazise kumazwana angezansi.
Lungisa ilayisense lakho lewindows lizophelelwa isikhathi maduze kuWindows 10
Ungaxhumanisa kanjani iwindows 10 ilayisensi ku-akhawunti ye-Microsoft
[Kuxazululiwe] Iphrinta ayisebenzi Iphutha Ikhodi 20 (Ukusebenza ku-HP, EPSON, Canon, Mfowethu)
Kuxazululwe: I-AMD Radeon Software iyekile ukusebenza windows 10, 8.1 no-7
amawindows 10 updates ehluleka ukufaka
sebenzisa i-usb njengamawindi enqama 10
ukufaka kanjani kabusha amashayeli wokubonisa
yehlulekile ukufaka windows 10 inguqulo 1903
isikrini esimnyama esinezikhombisi ngemuva kokungena ngemvume
ungayisebenzisa kanjani i-readyboost windows 10